असली जातीय नाम प्रयोग गरौँ | नेपाल इटाली डट कम
असली जातीय नाम प्रयोग गरौँ
February 12, 2013 — nepalitaly
फेसबुको एउटा पेजमा देखिएको यो सत्य संदेश मुलक पोस्ट जस्ताको तस्तै
एउटा छुट्टै प्रसंग। जब म सानो थिए younger than I am now, म जापानिज भाषा सिक्न पाटन रेयूकाईले संचालन गरेको पुल्चोक स्थित कक्षामा जान्थे। त्यहाँ धेरै साथीहरु (खस, नेवार, तामांग, गुरुङ) बनाएँ। मैले3level सम्म राम्रै सिकें। पछि मेरा साथीहरुलाई गार्हो लाग्न थालेछ कि के हो या समयको अभाव, उनीहरुले गुरुले सिकाउदै गर्दा खितिति हाँस्थे। हास्नेहरु प्राय नेवार साथीहरु हुन्थे। कारण के रहेछ सुरुमा बुझ्न सकिन। ‘हजिमेमाशिते’ भन्दा झन् हास्थे। यो शव्द भित्र नेवारी छाडा कुरा सुनिने भएकोले गर्दा रहेछ पछि थाहा पाएँ। अब मेरो consicious mind भित्र पनि यसले धेरै प्रभाव पार्दै मेरो learning ability ध्वस्त बनाउदै थियो। म हारें। मैले जापानिज भाषा quit गरें अनि धेरै पछि फ्रान्सेली भाषा अन्तिम level सम्म सिक्दै डिप्लोमा उतिर्ण गरें। मेरो एक जना नेवार साथीले निरन्तरता दिनुभयो र अहिले उहाँ जापानमा हुनुहुन्छ। उहाँले राम्रै संग भाषा सिकेर अहिले आफ्नो मात्रै होइन सबैको कल्याण हुने काम गरिरहनु भएको छ नेपालमा रोजगारी दिएर। उहाँले जापान बाट काम outsource गर्नुहुन्छ।
हामीलाई पंचेको महेन्द्र माला मा कहिले कुनै जाति खस हुन्छ भनेर घोकाइन्थ्यो? कहिले पनि थिएन किन कि ‘खस’ शव्द जो अधिकांस पन्चेहरु खस जातिका थिए उनीहरुलाई यो शव्द प्रयोग गर्दा हिनता बोध हुन्थ्यो रे! अब के यो शव्द हामीले प्रयोग गर्नै भएन त उसोभए?
पंचायत धलिसक्यो गणतन्त्र आइसक्यो अझ पनि ती पंचायती शिक्षा प्रणाली लागू गरि रहने? हामी मध्य कतिलाई खस भन्न अप्ठ्यारो लाग्छ किन कि हामीले भन्नै खोजेनौ अनि सिकेनौ। लोकतन्त्र स्थापित भैसकेपनि बाहुन/छेत्री भन्दै मनुवाद (मनु स्मृति), aristocracy लाई कहिले सम्म निरन्तरता दिरहन्छौँ?
नेपाल यसै परिवर्तन नभाको हो र? Plagairism मा परेका scholarले जस्तै पुँजीवाद, मार्क्सवाद, माओवाद, समाजवाद खोइ के के हो वाद नेपाली राजनीतिक, सामाजिक परिवेशको फाइदा उठाएर हु बहु नक्कल उतारेर हुन्छ? सायद बितिसकेका karl marx ले plagiarism मा पर्ला भनेरै होला अहिलेसम्म पनि समाजबाट, देशको राजनीतिबाट दुर्घन्धित, घृणित मनुस्मृतिको खोल च्यातचुत परेर फाल्न नसकेका?
जसरि मनुवाद मनुस्मृति समाजमा बिष घोल्न सफल भएको छ त्यस्तै आधुनिक परिवेशमा पुरानो phase out नगरिएको पंचायती शिक्षा प्रणालीले त्यसको ठाउँ ओगटिरहेको छ। समानताको अनुभूतिको लागि हामी आफै सजग, सक्रिय हुनु जरुरि छ। यसले भविष्यमा हामी साथै हाम्रा सन्ततिहरुलाई समानताको फल संगै prosperityको पनि स्वाद दिरहनेछ।
बाहुन/क्षेत्री होइन ‘खस’ भन्न सिकौं। यिनीहरुको जे असली जातीय नाम हो त्यहि प्रयोग गरौँ र गराऔं साथै पुरानो पंचायत शिक्षा नीतिलाई पनि uproot गरौँ।!
Genuine Equality for Prosperity….
« समवेदनाका सन्देशहरू
कसरी भयो माओवादीमा भागबण्डा »